Khanyisa ibhulabhu ye-Fluorescent ngaphandle kokuyifaka
Funda indlela yokwenza ukukhanya kokukhanya kwe-fluorescent ngaphandle kokungena kuyo! Ezi mvavanyo zenzululwazi zibonisa indlela yokuvelisa umbane omile, okhanyisa iingubo ze-phosphor, okwenza i-bulb ikhanyise.
Izixhobo zoVavanyo lweLuhlu lokukhanya
i-bulb fluorescent (iibhubhu zisebenza ngokufanelekileyo.) Kulungile ukuba ukhanyiso lukhanyiswe.)
Naluphi na oku kulandelayo:
Isonga sikaSaran (iplastiki)
Ubomvu bezilwanyana okanye ubomvu obuqho
Ukukhanya kwe-fluorescent kuyimile ngokugqibeleleyo, ngoko unokuba unqwenela ukuhlambulula i-bulb ngelinen elomileyo ngaphambi kokuba uqale. Uza kukhanya ngokukhazimulayo kwimozulu esomileyo kunokuba kuphezulu kumanzi.
Yonke into ofuna ukuyenza yipuphule i-bulb fluorescent ngeplastiki, isitya, ubomvu okanye ibhaluni. Musa ukusebenzisa uxinzelelo. Udinga ukukhathala ukuze wenze iprojekthi isebenze; akudingeki ukuba ucinezele izinto kwi-bulb. Ungalindele ukuba ukukhanya kube kukhanya njengoko kungenakunyulwa kwi-outlet. Inceda ukucima izibane ukuze ubone umphumo.
Phinda uzame nezinye izinto kwiluhlu. Zama ezinye izinto ezifunyenweyo ezisekhaya, kwiklasi, okanye kwibra. Yiyiphi eyona nto ibhetele? Ziziphi izinto ezingasebenzi?
Ukuxubha ityhubhu yeglasi kudala umbane omile. Nangona kukho umbane ongaphantsi kunomlinganiselo wombane owanikwa ngodonga lwangoku, okwaneleyo ukuvuselela i-atom ngaphakathi kwiphubhu, ukuguqula ukusuka kwimeko yomhlaba ukuya kwimeko evuyisayo.
Iimpawu zee-atom ezinokukhulula i-photons xa zibuyela kumhlaba womhlaba. Oku kuluphawu lwe-fluorescence . Ngokuqhelekileyo, la ma-photons akwibala le-ultraviolet, ngoko i-bulbs i-fluorescent ibe neengubo zangaphakathi ezithatha ukukhanya kwe-UV kwaye ikhupha amandla kwi-spectrum ebonakalayo.
Ama-bulb e-fluorescent aphuka ngokulula, avelise i-shards ezibukhali zeglasi kunye nokukhulula umphunga we-mercury emoyeni.
Gwema ukufaka uxinzelelo oluninzi kwi-bulb. Ingozi zenzeke, ngoko ke xa ubeka i-bulb okanye ulahle enye, gqoba iiplagi zeplastiki ezilahlayo, usebenzise amacwecwe amaphepha amancinci ukuze uqokelele zonke izicucu kunye nothuli, ufake iiglavu kunye neglasi ephukileyo kwisikhwama seplastiki. Ezinye iindawo zineendawo eziqokelekileyo zokuqokelela iibhubhu ze-fluorescent, ke khangela ukuba umntu uyatholakala / kufuneka phambi kokuba ufake i-bulb kwindawo. Geza izandla zakho ngesepha kunye namanzi emva kokuphatha ityhubhu yefluorescent ephukile.
Indlela yokwenza i-Cannon Ring Cannon
I-Recipe yeSlime Recipe
I-Simple Science Science Magic Tricks
I-Admissions yeYunivesithi yaseGran Canyon
IsiGaba seBanga leMatriki lokuqala-I-Grade yeBanga leMatriki yoFundo
Ngaba kufuneka ndifumane i-MBA Degree Online?
I-Biography yakwa-Israyeli Kamakawiwo'ole
Yonke into ngePentekoste kwiCawa yamaKatolika
Ubume beSilamsi: i-SAWS